How to remove the PVC panel factory and suppliers | Bofan
PVC valin-drihana & rindrina tontonana
PVC rindrina kobany amin'ny fomba maimaim-poana-DIY
Ny hanesorana ny PVC tontonana
1. ankapobeny fandravana dia ho tsara kokoa
, rehefa manaisotra ny haingo ny tany am-boalohany condole ambony, dia tokony atao ny hanatanteraka handrava tanteraka, tsy te-hitana am-boalohany condole ambony ka handravaka ny rafitra. Indrindra indrindra, ny am-boalohany valin-drihana mihantona lanjan'ny Derrick, pendant sy ny rafitra dia tsy maintsy mihetsika, indrindra fa avy any hoavy fiarovana fiheverana, tamin'izany andro izany dia mety hisy vokany eo amin'ny fametrahana tatỳ aoriana.
2. faritra fiarovana
faritra fiarovana no tena hevitra amin'ny fanesorana ny valin-drihana. Rehefa handrava, te-handringana fahefana famatsiana aloha, ny faritra tany am-boalohany ao anatin'ny fantsona manala condole ambony araka izay azo atao. Satria ireo faritra tsy azo ampiasaina intsony, faharavan'ny tanteraka dia tsara.
3.Protect fitaovana hafa
Raha ny valin-drihana esorina, dia tena mora ny ho tonga manerana fitaovana hafa ao an-trano. Raha ny valin-drihana esorina, ny fiarovana ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa tokony hodinihina. Maro ny taonjato maro-trano antitra manana fantsona fanafanana ny tafo, ary ny sasany dia manana trano rivotra-pana koa ny rafitra izay tsy manimba rivotra ducts sy flues.
4. Tandremo ny toerana azo antoka
ny olona izay mirotsaka amin'ny faharavan'ny condole ambony dia tsy maintsy hitafy ny fiarovana fiarovan-doha, tsy condole ambony ka lavo hamotipotika ratra, tamin'izany andro izany, rehefa hanala, dia afaka tapaka ao anatin'ny vy keel mazava, dia tsy maintsy tsy tanana ratra, manao glove ny manao niasa. Ny valin-drihana nesorina tsy maintsy nanosika sy napetraka mba tsy fanilihana ary naharatràna olona.
Post fotoana: Nov-10-2018
Industrial Zone, Tudian, Tongxiang, Zhejiang, Sina